* Mmelite: Ezinyere eziokwu stats ụlọ ọrụ ọhụrụ.
Akụkọ Verisign na-ekwu na ụlọ ọrụ ngalaba na 2019 (Q3) nwetara 5,1 відсотка уто kwa afọ, na-akụ ụma n’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde nde 360 ​​nde, ndị ga-aga n’ihu na- ето.
Nyere otu mkpa dijitalụ dị n’etiti ọha na eze nke oge a, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya, ma ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ nchịkwa ma ọ bụ otu onye na-ahụ maka dijitalụ, iji nlata abata.
WHSR nweta ụgwọ ntinye akwụkwọ site n’aka ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị a kpọtụrụ aha na isiokwu a. Ọ na-ewe ọtụtụ mgbalị na ego iji mepụta ọdịnaya bara uru dị ka nke a – a kwadoro nkwado gị nke ukwuu.
3 Кращі генератори Агалаба
3.3 Ага 3- Ага
3.6 6- Опишіть генератор імен компанії
4.1 Его оле ка нгалаба ага га-ефу м?
6.1 Ммеліт: Cloudflare dị ka ngalaba Aha na-edeba aha
7.1 Кеду аха нгалаба ага?
7.2 Тут ви знайдете сайт на сайті n’iji ntu
Ọ bụ isi okwu nke okwu a na-apụghị ịghọta na, mgbe ịdebere na ihe nchọgharị ahụ, перенаправити onye ọrụ na IP gị.
Nke a siri ike ịmalite ma bido. Nke bụ ihe просто ngalaba aha pụrụ iche ga-adị mfe maka ndị ọrụ iji cheta ma pịnye.
Ага ngalaba gị bụ njirimara gị. Ọ bụ otú ndị mmadụ si achọta gị, aha ndị ahịa na-enyefe ndị ọzọ.
Debe ya dị mkpụmkpụ ma dị mfe icheta (ngalaba anyị "Розкрито секрет веб-хостингу" bụ ihe ọjọọ!)
Діе я ма гụọа угборо угборо тупу ịзụта (ihe atụ – kpachara anya ma ọ bụrụ na aha azụmahịa gị bụ "Діксон Веб")
Кращі генератори Агалаба
Ebe a b ole na ole ngalaba aha генератори iji nyere gị aka iche echiche ngalaba aha echiche.
Domainr ga-agbakwunye ihe mmemme pụrụ iche nke творчість на ngalaba aha gị site n’itinye atụgharị ọzọ. Гаа на: Domainr.com
Ndị ọrụ Wordoid na-aga ịmepụta aha ndị na-enweghị aha ma ọ bụ tinye isiokwu iji jiri ya mee ihe. Гаа на: Wordoid.com
Ага 3- Ага
Aha Aha na-edepụta aha випадковий na ma na-enweghị mkpokọta mkpokọta. Гаа на: AhaStation.com
Dot-o-mator bụ ngwá ọrụ dị mfe nke jikọtara okwu abụọ iji mepụta aha ọhụrụ. Гаа на: Dotomator.com
Lean ngalaba Search bụ nyocha ọchụchọ dị mfe maka ịchọta aha ngalaba dịnụ. Ngwaọrụ ahụ na-enyere ndị ọrụ aka ịchọta ngalaba aha site na ịchọta okwu ọchụchọ na isiokwu ndị ọzọ a na-ahụkarị na ngalaba aha. Налаштування автоматичної автоматичної роботи (WordPress.com) в 2013 році. Перелік: LeanDomainSearch.com
6- Опишіть генератор імен компанії
Shopify si Генератор імен бізнесу, як і раніше, так і немає. Malite site na nahọrọ isiokwu ị chọrọ ka ngalaba gị gụnye, ị ga-enweta ọtụtụ narị aro. Гаа на: Shopify Генератор імен бізнесу.
Ndenye aha na ntinye ohuru na-adabere nke ukwuu na ndọtị ya (amara dị ka TLD). На ihe atụ a NameCheap, a .com ngalaba na-akwụ ụgwọ $ 10,98 / afọ ma mee ọhụrụ na otu ọnụahịa. N’aka nke ọzọ, astorestore ngalaba efu $ 4,99 / afọ ịdebanye aha ma $ 48,88 / afọ iji megharịa.
Я просто, tupu ị gaa n’ihu wee nweta aha ọhụrụ aha, ejiri m n’aka na enwere ajụjụ gbara ọkpụrụkpụ ịchọrọ ịjụ. Nke ahụ bụ:
Его оле ка нгалаба ага га-ефу м?
Ogologo oge ahụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ị nwere ike ịchọrọ (atụ: ịgbakwunye nzuzo ngalaba, ịga maka ọtụtụ afọ, wdg.)
Ọ bụ ezie na ọ na-esiri ike ịkọ kpọmkwem ókè ngalaba aha nwere ike isi na-efu, ị nwere ike na-atụ anya ịkwụ ụgwọ ọ bụla n’etiti $ 2 na $ 20 kwa afọ, dabere e ego bụ pụrụ iche n’elu ikpo okwu na-enye.
Ụkpụrụ isi nke ọma bụ na ọpụpụ ngalaba (.global, .design ,, .cheap) nwere ike ibu ugwo karịa ọnụego ngalaba (.com, .net), ebe ọ bụ na e mepụtara ha n’oge na-adịbeghị anya .
ND # MỌD # # 1 – може містити ike nweta ngalaba akwụghị ụgwọ site n’aka ụfọdụ ndị na-eweta mba, gụnyere Enwe Mmasị na Hostinger. Iji dọta ndị ahịa ọhụrụ, ụfọdụ ụlọ ọrụ Bochum na-enye ndị ahịa ahịa mbụ ngalaba n’efu. Y’oburu na-akwado weebụsaịtị maka oge mbụ, i nwere ike ịchekwa ụfọdụ ego site na ịnabata ndị ọbịa weebụ a.
NDMỌD №2 – NameCheap na – akwado nkwalite pụrụ iche kwa ọnwa – ị nwere ike lelee ibe weebụ ha tupu ịzụta ngalaba ọhụrụ.
Enwere uru na ọghọm dị na ụzọ abụọ ahụ mana n’ikpeazụ, ọ dị n’aka gị ma ịchọrọ ịkwụ ụgwọ maka adreesị dị oke ọnụ ma ama ama (ngalaba ndị na-arụ ọrụ) ma ọ bụụ ịọị ọịịị maka ngalaba ọhụrụ).
Dị ka e kwuru na mbụ – A ezigbo aha ngalaba nwere ike ịbụ ihe na-ekpebi ihe na-eme ma ọ bụ agbaji ika gị, ya just jiri aka gị họrọ otu.
Ugbu a na ị kpebiri na ngalaba aha dị egwu, ọ bụ oge iji chọpụta ma aha ngalaba ahụ ị chọrọ nwere dị ma ọ bụ.
Na-enyocha ma ngalaba aha nnweta dị mfe. Ị nwere ike ime nchọpụta dị mfe na otu n’ime ngalaba na-edebanye aha; ma ọ bụ, jiri sistemụ ọchụchọ Whois iji nyochaa ma aha ngalaba gị dị ma ọ bụ na e.
We nwere ike ịlele ma ọ bụrụ na ngalaba aha dị Hover.
Дебанье ага нгалаба ма ọ бụрụ на ọ дị.
Ọnụahịa maka iji ọrụ ndebanye aha nzuzo nwere ike ịdị iche ma na-emekarị, ọ na – esi na $ 10 – $ 15 kwa afọ.
Ụzọ kacha mma bụ ịga ụlọ ọrụ na-edeba aha na ngalaba. A ngalaba regsitrar ga-ekwe ka ị denyere aha gị na ngalaba aha ma site kwa afọ договори ma ọ bụ a ologo oge nkwekọrịta.
123 Рег £ 11,99 11,99 фунтів стерлінгів £ 4,99 / afọ
Domain.com $ 9,99 / афọ 10,99 дол. США / афọ –
Ганді € 12,54 / афọ € 16,50 / афọ –
GoDaddy $ 12,17 / афọ $ 12,17 / афọ 7,99 дол. / Аф
Наведіть курсор $ 12,99 / афọ $ 15,49 / афọ Безкоштовно
Ага дешево $ 10,69 / афọ $ 12,88 / афọ Безкоштовно
Ngwọta Ntanetị $ 34,99 / афọ $ 32,99 / афọ $ 9,99 / афọ
Ngalaba dị oké ọnụ ahịa nwere ike iru ọtụtụ puku dollar ma mgbe nke ahụ gasịrị, ụgwọ akwụmụgwọ ahụ bụ ọnụ ọgụgụ dị mma ($ 10 – $ 15 kwa afọ).
Ммеліт: Cloudflare dị ka ngalaba Aha na-edeba aha
Cloudflare emeela aha ha na-edebanye aha ha nke na-enweghị ọnụahịa ntinye ego ma na-enye ọnụahịa ahịa maka TLDs dịka .com, .net, .io, na wdg. Ugbu a, ọrụ ahụ bụ nanị ndị ahịa Cloudflare dị ugbu a nakwa na ha ga – debanye aka na Ntinye Mmalite ha a ga-akpọtụrụ akwụkwọ ahụ na usoro ihe omume ahụ.
Ọ nwere ike ịzụta ngalaba aha ozugbo site na onye na-arụ ọrụ weebụsaịtị ma ọ bụ ụlọ ọrụ nhazi?
Ụfọdụ n’ime ndị na-ewu ụlọ ọrụ kacha mma taa, dị ka Wix або Obi ọjọọ, ga-enye gị ngalaba aha omenala n’efu maka otu afọ ma ọ bụrụ na ị debanyere atụmatụ ha kwa afọ.
Otú ọ dị, ego ọhụrụ ahụ nwere ike ịdị iche na-adabere n’elu ikpo okwu n’onwe ya na Wix на-enye $ 14.95 kwa afọ iji megharịa mgbe Weebly dị ntakịrị ọnụ na $ 19.95 kwa afọ.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịbụ ntakịrị ọnụ ahịa tụnyere ịdenye ngalaba onwe gị, uru nke ịzụta ngalaba aha omenala site na onye na-ewu ihe na weebụ bụ na ị nwere ike niọọgaọọụrekere jikekekekekeke -enweghị.
Ị nwere ike ịhọrọ ịzụta ngalaba na-arụsi ọrụ ike ma nyefee ikike site na ọrụ ndị dị ka aha ngalaba aha.
Кеду аха нгалаба ага?
E nwere ọtụtụ aha ngalaba aha ndị ọrụ dịnụ, mana ebe a bụ ole na ole ị nwere ike ịlele: Escrow.com, Sedo, на BuyDomains.
Тут ви знайдете сайт на сайті n’iji ntu
Ka anyị kwuo na ị chọtara ngalaba aha ma ma gị ma onye ire ere ahụ kpebiri na ego. Загадка на-agh-: Olee otú ị na-akwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ ego ma jide n’aka na onye nwe na-enyefe ngalaba ngalaba gị?
Nke ahụ bụ ebe escrow abata. Ị nwere ike iji ọrụ escrow iji jide n’aka na azụmahịa ahụ na-aga n’ihu. Kedu ka я si eme nke ahụ? Nke a bụ otú:
Ozugbo i kpebiri na ego ahụ, ị ​​na-akwụ ụgwọ gị (сайт na waya, kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ usoro ọ bụla ọzọ) na ụlọ ọrụ ahụ.
Ị ga – ekwenye na ụlọ ọrụ escrow na nwe nke aha ngalaba ahụ ebutela gị. Jiri WHOIS або WHSR Web Host Spy iji chọpụta ma emelitela profaịlụ onye nwe ma ọ bụ.
Mgbe ị na-achọ maka ngalaba aha mbụ, nke a na-ahụkarị na ọrụ ndị na-ere ahịa, ndị na-ere ya onwe ha, na ụlọ ahịa ndị ịre ahịa – ị ga-achọpụta nwe näre uru haru haru site bụla site na ole na ole dollar ruo elu ma ọ bụ isii ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ asaa.
Ot’u otu ihe di ka ogologo, asusu, ihe di iche iche, na ndu ndi mmadu. Enweghị usoro ọ bụla nwere ike inye gị ụgwọ zuru oke. Otú ọ dị, e nwere ụzọ, iji nye gị atụmatụ ntụrụndụ nke aha ngalaba ma ọ chọrọ ntakịrị nyocha nke gị.
Ihe DNJournal a a ngalaba ahịa akụkọ nke ha na-emelite ma na ya, ha depụtara aha ngalaba ndị na-ere n’oge na-adịbeghị anya site n’aka ọtụtụ ọrụ ngalaba. Mgbe ị na-elele anya, gee ntị na isiokwu nke ngalaba ahụ, ogologo, na ihe ndị ọzọ metụtara ya iji nweta echiche nke otu aha aha aha njirimara.
Akụkọ nchịkwa ahịa mpaghara bipụtara na DN Journal (травень 2018)
Nseta ihuenyo nke DN Journal звіт про продаж.
Ọ dị mkpa iburu n’uche na akụkọ ahụ na-ekpuchi obere ọnụ ọgụgụ ngalaba аха, я просто, ọ bụghị kpọmkwem ndepụta kachasị.
Ụfọdụ n’ime saịtị ndị ị nwere ike ịlele bụ Estibot, WebOutlook, по URL Nyochaa.
Ọzọ, enwereghi ugwo ego maka ịzụta ngalaba aha ma ị nwere ike ichere ha ka ha ha na-agbanwe ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta izugbe ngalaba aha, ị nwere ike ịga na saịtị dịka Ebum n’uche або Zụrụ ngalaba iji nwee mmetụta maka ụgwọ.
Сайт ugbu a, ị ga-enwerịrị ozi zuru oke iji nyere gị aka denyere aha aha omenala maka akara ma ọ bụ azụmahịa gị onwe gị.